FILIPAI 3 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (FIL 3)
Na nchịkọta okwu ndị a nile, ụmụnna m, na-aṅụrịnụ ọṅụ nꞌime Onyenwe anyị mgbe nile. Ike adịghị agwụ m ịgwa unu ihe ndị a. Ọ bakwaara unu uru ịnụ ụdị okwu a mgbe nile.
Kpachapụrụnụ onwe unu anya nꞌebe ndị mmadụ ọjọọ ahụ yiri nkịta nọ. Ndị ahụ na-ezi unu na ọ bụ nanị mgbe e biri unu ugwu ka a ga-azọpụta unu.
A sị na e nwere otu onye pụrụ ịnya isi na o nwere ike ịzọpụta onwe ya, onye ahụ gaara abụ mụ onwe m. A sị na ndị ọzọ na-eche na a ga-azọpụta ha nꞌihi ihe ha bụ, a gaara azọpụtakwa m nꞌihi ihe m bụ.
Ee, akpọọla m ihe ndị a nile ihe efu, nꞌihi na a pụghị iji ha tụnyere ihe dị oke ọnụ ahia dị ka ịmazu Kraịst Jisọs, Onyenwe m. Etufuola m ihe ndị a nile, gụọ ha dị ka ihe na-abaghị uru, ka m nwee ike nwezuo Kraịst.
Anaghị m ekwu nꞌebe a na etozuola m, mara ihe nile. Amụtachabeghị m ihe nile m kwesịrị ịmụta. Kama ihe m na-eme bụ ịgbalịsị ike ịrụ ọrụ m na-aga nꞌihu, tutuu ruo ụbọchị ahụ m ga-abụ ihe ahụ nile Kraịst onye zọpụtara m, chọrọ ka m bụrụ.
Enwere m olileanya na unu nile, bụ ndị tozuru oke nꞌiso Jisọs Kraịst, ga-aghọta ihe ndị a m na-ekwu. Ọ bụrụkwa na unu nwere nghọta ọzọ dị iche banyere ihe m kwuru, amaara m na Chineke ga-eme ka ọ pụtara unu ìhè,
ma ọ bụrụ na unu na-ejidesi eziokwu ahụ unu natara aka ike, na-emekwa ihe unu nụrụ.
Ụmụnna m, na-agbasonụ ụdị ndụ m na-adị, chọpụtakwanụ ndị ọzọ na-adị ndụ ha dị ka anyị si adị, mee ha ihe ilere anya unu.
Nꞌihi na agwala m unu nke a ọtụtụ mgbe, na-achọkwa ịgwa unu ya ọzọ ugbu a. Lee, anya mmiri dị m nꞌanya ugbu a m na-ekwu ya sị na e nwere ọtụtụ ndị na-ebi ndụ ha dị ka ha bụ ndị iro obe Kraịst nꞌezie.